YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 22
22 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/ku1smr022 March2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/22/20100အကြံပြုခြင်း
ဒီနှစ်တော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ မေးခွန်းတွေ အလွန်လွယ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်၊ အစိုးရက ကျောင်း သားတွေ ဆူဆူပူပူ မဖြစ်အောင်လို့တဲ့။ အဲဒီလို အခြေအ နေက အမှတ်စာရင်းထွက်ချိန်မှာ အမှတ်အလွန်မြင့်တဲ့ ပြသ နာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမြင့်လာရင် သာမန်ကျောင်းသားတွေခင်မျာ ကိုယ်ဝါသ နာပါတဲ့ ဘာသာက အမှတ်မမီ၊ အမှတ်မီတဲ့ဘာသာက ကိုယ် မကြိုက်နဲ့ ဘွဲ့ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ လုံးချာလည် နေကြတာ ဓမ္မတာဖြစ်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ကျမတို့ အဖေတွေခေတ်က ၁ဝ တန်းအောင်ပြီဆိုရင် တက္ကသိုလ်မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာ ၃ ခုကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါတယ်၊ ဆေးကျောင်းတက်ချင်တဲ့ လူက Bio တွဲယူရပါတယ်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်ရင် သင်္ချာကိုပါ တွဲရပါတယ်၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့လိုချင်ရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာတွေကို တွဲယူရပါတယ်၊ တချို့လည်း 2nd, အောင်ပြီးမှ တခါ ဘာသာတွဲ ပြောင်းချင်ရင်လည်း ရပါသေးတယ်၊ ကျမ အဖေဆိုရင် ဆေးကျောင်း ၂ နှစ် တက်ပြီးမှ ဝိဇ္ဇာဘက်ပြောင်းပြီး ဒဿနိကနဲ့ ဘွဲ့ယူခဲ့ပါတယ်၊ ပြီးတော့မှ ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
ကျမတို့ ခေတ်ကျတော့ ရွေးခွင့်မရပါဘူး၊ တနေ့ကို ၃ နာရီနဲ့ ၆ ရက် အသည်းအသန်ဖြေခဲ့ရတဲ့ စာမေးပွဲရမှတ်ဟာ ကျမတို့ကို ဘာ လုပ်ပါ၊ ဘာဖြစ်ပါစေဆိုပြီး ရွေးချယ်ထားပါတယ်၊ ဝါသနာ ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လိုင်းကိုပဲ ယူခွင့်ရှိပါတယ်။
ကျမတို့ ခေတ်ကတော့ ဆေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အမှတ်အများဆုံး လူ ၅ဝဝ ကိ်ုရွေးထုတ်ထားတာပါ၊ ဘယ် လောက်ပဲ အမှတ်များများ FRC လို့ခေါ်တဲ့ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး၊ One_FRC လို့ခေါ်တဲ့ မိခင် (သို့) ဖခင်က ဧည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်လည်း ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့် မရှိပါဘူး။
ဒုတိယ အမှတ်အများဆုံးကတော့ R.I.T (Rangoon Institute Of Te-Chnology) လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ် လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး R.I.T ဝင်ခွင့်ရဘို့ မိန်းခလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေး သတ်မှတ်တဲ့အမှတ် မတူပါဘူး၊ မိန်းခလေးက သိသိသာသာ အမှတ်ပိုများနေတတ်ပါတယ်၊ ဥပမာ ယောကျာင်္းလေးက အမှတ် ၄၂ဝ ရလို့ R.I.T ဝင်ခွင့်ရရင် မိန်းခလေးက အမှတ် ၄၅ဝ လောက်ရ မှ ဝင်ခွင့်ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် G-Hall သူဖြစ်ဘို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။
တတိယ အမှတ်အများဆုံးကတော့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပေါ့၊ မိန်းခလေးတွေ များလွန်းလို့ မိန်းမလှကျွန်းလို့တောင် အမည်ရတဲ့ တက္က သိုလ်ပါ၊ Institute လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီ လိုင်း ၃ လိုင်းမှ မရရင် ဝိဇ္ဇာ-သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှာ တက်ကြရပါတယ်၊
တချို့လဲ ဝ/သ တက္ကသိုလ်မှာ မတက်တော့ဘဲ G.T.I လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုသိပ္ပံမှာတက်ကြပါတယ်၊ စာပေးစာယူလို့ခေါ်တဲ့ စနစ်တခုနဲ့ ညပိုင်းတက်ရတဲ့ လုပ်သားများကောလိပ် ဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ တချို့နှစ်တွေမှာ G.T.I ကနေ အမှတ်များတဲ့လူတွေ R.I.T ကို join ခွင့် ရပါတယ်၊ လူအများကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အများဆုံး ၃ ဦး လောက်ပါ၊ ဒီအခွင့်အရေးကို နှစ်တိုင်းလဲ ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာ ဘဲဖြစ်ဖြစ် Institute တက်ခွင့်မရတဲ့လူဟာ ရပ်ကွက်ထဲမှာရော၊ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှာပါ မျက်နှာပန်း သိပ်မလှပါဘူး။
ဒီတော့ မိဘတွေက စာမေးပွဲ ရာသီကို ရောက်တာနဲ့ သားသမီးတွေကို ဖိအားပေး ပါတော့တယ်၊ “အမှတ် နည်းသွားရင် ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာသိလား စာသေချာကျက်နော်၊” ဘာညာ ဆိုတာမျိုးကို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေကြပါတယ်၊ ကာယကံရှင် ကျောင်းသားတွေ က လည်း အမှတ်များများရချင်ကြပါတယ်၊ ဒီတော့ အမှတ်များများရအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်ကျုရှင်တက်ရမလဲ၊ ဘယ်အထူးထုတ် ဝယ်ရမလဲဆိုတာတွေက အရေးတကြီးအကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်၊
ကျမတို့ ၁ဝ တန်းတုန်းက စာမေးပွဲမှာ ၉ တန်း စာတွေကိုပြန်မေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ ၉ တန်းမှာ စာမကြေရင် ၁ဝ တန်းမှာ အမှတ်ကောင်း ဘို့ မလွယ်ပါဘူး၊ ဒီတော့ ၉တန်းတက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျုရှင်ကောင်းကောင်းကို ရှာတက်၊ နွေရာသီမှာလဲ ကျုရှင်ဆက်တက်၊ ၁ဝ တန်း စာ မေးပွဲအတွက် တခါတည်း ကြိုပြင်ဆင်ကြ ရပါတယ်။
အမှန်တကယ်က ၁ဝ တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက် ကျမတို့ သင်ကြားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေကို တကယ်ရော အသုံးချဖြစ်ရဲ့လား၊ တချို့ ကတော့ အသုံးမချကြပါဘူး၊ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ? ဒီပညာရေးစနစ်ဟာ တကယ်ရော လိုအပ်လို့လား၊ အကျိုးရော ရှိပါရဲ့လား? တချို့ ကတော့ အသုံးချပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေကို အမှန်တကယ် ကျေနပ်နေကြလား၊ ဝါသနာနဲ့ဘဝ ထပ်တူကျတဲ့လူတွေဆိုတာ အင်မတန် ကံကောင်းတဲ့ လူနည်းစုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ အဖေဟာ ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက် သူရဲ့တပည့်တွေဟာ ကျမတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ၊ သူငယ်ချင်း တချို့အကြောင်း ကို နမူနာအနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျမသူငယ်ချင်း နေမျိုးးအောင်ဟာ အပြင်စာကို တော်တော်လေးဖတ်ပါတယ်၊ ကျမတို့ အချစ်ဝတ္တုတွေ ဖတ်နေတဲ့အရွယ်မှာ သူက ဘာသာပြန်ဝတ္တုတွေ ဖတ်နေပါပြီ၊ သူက စိန်ကုန်သည်၊ ရွှေကုန်သည်လို ဝတ္တုမျိုးးကို အထူးနှစ်သက်တတ်ပါတယ်၊ တကယ်လည်း သူ က စီးပွားရေးအမြင် ရှိတဲ့လူပါ။
ဒါပေမဲ့ သူ့အမေက တဦးတည်းသောသားဖြစ်တဲ့ သူ့ကို ဆရာဝန်ပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်၊ သူ့အမေက ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးနဲ့ ၉ တန်း ထဲက ဆရာမြတ်ထိန်လင်းတို့လို ဆရာကြီးတွေရဲ့ဝိုင်းမှာ သေချာသင်ကြားစေပါတယ်၊ နွေရာသီမှာလဲ အနားမပေးပဲ ဝိုင်းတွေဆက် တက်ခိုင်းပြီး ၁ဝ တန်းဖြေချိန်အထိ ကျူရှင်မျိုးစုံနဲ့ ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်ရဘို့ အရမ်းကျိုးးစားခဲ့ပါတယ်။
အောင်စာရင်းထွက်တော့ ဂုဏ်ထူး ၄ ခုနဲ့ ဆေးဝင်ခွင့် ရပါတယ်၊ တကယ်က သူ ဆရာဝန် မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒကို လိုက် လျောဘို့ သူ ဆေးကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေကတော့ သားလိမ္မာအတွက် ဂုဏ်တက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးကျောင်းမှာလည်း အမှတ် ကောင်းကောင်းရပါတယ်။
ကျောင်းပြီးလို့ ဆေးခန်းဖွင့်တော့ သူ့အမေ မျော်လင့်သလို မအောင်မြင်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်အခေါ် ဆေးမလိုက်ဘူး ပြောရမှာပေါ့၊ လူသိပ် မလာပါဘူး၊ ဝါသနာကလဲမပါတော့ ၊ ဇွဲကလဲမရှိဘူးပေါ့၊ ဒီတော့ ၅ လလောက်ဖွင့်ပြီး ဆေးခန်းပိတ်လိုက်ပါတယ်၊ အစိုးရအလုပ် လည်း မလျှောက်တော့ပဲ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကားလေးတစီးဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ဝယ်လိုက်တဲ့ ကားကို သေချာပြုပြင် ပြီးပြန်ရောင်း လိုက်တာ မြတ်တယ်တဲ့၊ ဒါနဲ့ နောက်တစင်း ထပ်ဝယ်၊ ပြန်ပြင် ပြန်ရောင်းနဲ့ သူအလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်၊ ဒီတော့မှ သူ့အမေနဲ့ ယောက္ခမက သူ့ “ဇ” ကို သိလာပြီး အရင်းအနှီးထပ်ထည့်ပေးလို့ အဆင်ပြေသွားတဲ့ သူဟာ ၊ ဒီနေ့မှာတော့ M.B.B.S ဘွဲ့ရ ကားဝယ် ရောင်းတဦး ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်တဦးက ကျမညီမ ဝမ်းကွဲပါ၊ သူက အထက (၂) ဗဟန်း က “S” ခန်းမှာတောင် အဆင့် ၁ ကနေ ၃ အတွင်း အမြဲ ရှိနေပါတယ်၊ သူက ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်တာပါ၊ သူ့ရဲ့ အဖေနဲ့အမေက ဆရာဝန်တွေဆိုတော့ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝမှာ လူနာတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့ရ တာပါ။ ဒါပေမဲ့ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ရက်မှာ သူနေမကောင်းလို့ အမှတ်စာရင်းထွက်တော့ ဆေးဝင်ခွင့်မီဘို့ ၅ မှတ်ဘဲ လိုပါတယ်၊ ဆရာဝန် ဖြစ်ခွင့်မရတော့ ဖွင့်တာသိပ် မကြာသေးတဲ့ ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်ကို တက်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာလဲ သူစာတော်ပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် သမီးပြီး သူပါဘဲ၊ Master တောင် တက်လိုက်ပါသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကွန်ပြူတာကို ဂိမ်းကစားဘို့ပဲ ကိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်၊ သူအဖေရဲ့ ဆေးခန်းမှာတော့ အကူအညီ တော်တော်ပေးနှိုင်ပါတယ်၊ ကျမက သူ့ကို ဘာလို့ ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက် တာ မလုပ်တာလဲမေးတော့ သူက “မြန်မာပြည်မှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သပ်ရင် အရောင်းပြခန်းက အကိုက်ဆုံးပဲ ဒါပေမဲ့ နန္ဒာအေး (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး) ရဲ့ သမီးကို မကျော်နှိုင်လို့၊ သူက အခွန်အတုပ်တွေလွတ်တော့ ဈေးချင်း ယှဉ်လို့မရဘူး၊ အရင်းအနှီးလည်း သူ့လောက်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး ”တဲ့။
တချို့မိဘတွေကလည်း သားသမီးကောင်းစားတာပဲမြင်ချင်လို့ ဝါသနာပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ သူတို့ရွေးချယ်စေချင်တဲ့ အ တိုင်းဖြစ်အောင် ဖိအားပေးကြပါတယ်၊ တကယ်ကတော့ ပညာရေးဈေးကွက်လိုက်ရှာ ကြတာပါ။
အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတာက ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ ရေကြောင်းသိပ္ပံပါ၊ ဒေါ်လာစားတွေဆိုတော့ ဝင်ငွေကောင်းကြတာ ပေါ့။ ကျမ စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့သားက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်တော့ အမှတ်ပေါင်း ၃၇ဝ ကျော်ပါတယ်၊ ရေ ကြောင်းတက္ကသိုလ်ကို မမီပေမဲ့ ရေကြောင်းသိပ္ပံကိုတော့ မီပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အမေက ရေကြောင်းသိပ္ပံ တက်ခိုင်းပါတယ်၊ ကလေး က “E” မေဂျာယူချင်ပါတယ်၊ ဒီတော့ သားအမိတွေ ငြင်းကြခုံကြနဲ့ စကားများကြပါတယ်၊ အမေကလည်းသားကို သင်္ဘောသားဖြစ်မှ နောင်အရှည် ကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊ အခု ကလေးက လက်မခံချင်ပေမဲ့ နောက် ၁ဝ နှစ်လောက်ကြာရင် ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ် လို့ ထင်နေပါတယ်၊ ကလေးက ဝါသနာမပါတဲ့ သင်္ဘောသား မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဘယ်လိုမှ ညှိလို့မရပါဘူး၊ ကလေးအဖေကလဲ “မင်း ငါတို့ လို လစာလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့ ဒုက္ခ ရောက်ချင်လို့လား၊ မင်းလစာကို ဒေါ်လာနဲ့ရမှ လူယောင်သူယောင်ပြောင်တော့ မပေါ့” တဲ့ ကျမ လည်း သူတို့ လင်မယားရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ၂ ဘက် စလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
ကျမရဲ့ အဖေဟာ သူ ဝါသနာပါတဲ့ ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို မညည်းမညူ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင် ထမင်း မေ့ ဟင်းမေ့ပါ၊ ကျောင်းသားတွေ ထူးချွန်သွားရင် သူရတဲ့ ပီတိဟာ ကျမတို့ မိသားစုကို ကူးစက်လေ့ရှိပါတယ်၊ သူ တကယ်ဝါသနာပါ တဲ့ အလုပ်ကိုး။
ကျမရဲ့ ဦးလေး ဆရာဝန်ဟာ အတော်စေတနာကောင်းပါတယ်၊ လူနာတဦးကိုကြည့်ရင် အသေချာကိုလေ့လာပါတယ်၊ သေချာမေး မြန်းပြီးမှ ဆေးကုပါတယ်၊ ဆေးဘိုးလဲ အများကြီးမယူပါဘူး၊ ဘယ်တော့မှလည်း သဋ္ဌေးမဖြစ်ပါဘူး သဋ္ဌေးဖြစ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို လဲ သူ အားမကျပါဘူး၊ သူလက်ခံတဲ့ ဘဝအဓိပ္ပါယ်က လောကကြီး တခုလုံးကို အကျိုးမပြုနိုင်ရင်တောင်မှ တစိတ်တပိုင်း ထောက် ပံနိုင်ရင် လူ့ဘဝ လာရကျိုးနပ်တယ်တဲ့၊ လူတယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်လိုက်ရတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ့မှ မတူဘူးတဲ့။
သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလို ခံယူနိုင်တာလဲ၊ ဒီလို ခံယူနိုင်ဘို့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဝါသနာကို အရင်းခံဘို့ လိုပါတယ်၊ ဝါသနာ မပါဘဲ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာ ငြီးငွေ့လွယ်ပါတယ်၊ ပညာတခုကို ငွေရှာဘို့အတွက်ပဲ သင်ကြားတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ လွဲ နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်၊ အခြေခံကျတဲ့ ပညာရေးစနစ်ရဲ့ လွဲမှားမှုများကတော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကမဏ္ဍိုင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုပဲ မဟုတ်ပါလား။
Monday, 22 March 2010 18:07 စိုင်းအောင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦး
မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၀
(၁၆-၁၂-၉၁) ညဘက် ရေဒီယို သတင်းတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကနေ ထုတ်ပယ်ပြီးဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို NLDက အကြောင်းကြားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ပါလာတယ်။ NLD CEC ရဲ့ ခြေလှမ်းကို ထင်ထင် ရှားရှား မြင်လိုက် ရပါပြီ ။
“ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီ”
ကျနော်တို့ မြို့နယ်စည်းကော်မတီ ဖျက်သိမ်းတဲ့ စာကို NLD ကို မိတ္တူ ပေးထားပါတယ်။ (၁၄. ၂. ၉၂ ) နေ့မှာတော့ ကျနော်တို့  မြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂ဦးကို NLD အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်က ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှပါ ပယ်ဖျက် လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ နေ့စွဲနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို မိမိဖာသာ ဖျက်သိမ်းပြီး ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း မရှိဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လိပ်မူ တင်ပြခြင်းကြောင့် NLD စည်းကမ်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဟု ဆိုကာ ထိုနေ့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့် အမှုဆောင် (၁၅) ဦးကိုပါ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ် လိုက်ပါတယ် တဲ့။
ကျနော်တို့ကို NLDက ထုတ်ပစ်လိုက်တော့ ကျနော်တို့ နည်းနည်းမှ စိတ်မထိခိုက်တော့ပါ။ တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုနဲ့ ခုမှ ဘ၀တူ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ရင်ကော့ ထားလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ထိုင်ဦးချသင့်တဲ့သူတဦးရဲ့ သတင်းကို ကြားရပါတယ်။
NLD ၏ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့မည့် အရိပ်အယောင်အပေါ် ၉၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်းများက ဝေဖန်
1998 Generation Students Criticize On Main Opposition Party Pay Respect To Junta
၁၉၉၈ ခုနှစ်က NLD ပါတီ၏ ရက်ပေါင်း ၆၀ တွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး တောင်းဆိုချက်ကို ထောက်ခံ သော အားဖြင့် လှည်းတန်းလမ်းဆုံတွင် ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့သော ကျောင်းသား ဟောင်းများက ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် NLD ပါတီမှ စစ်အစိုးရကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင်ကောင်း ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုသော မှန်းဆချက်များအပေါ် ဝေဖန်လိုက်သည်။
၉၈ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကိုကျော်လင်းဦးက “ NLD က ၉၀ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ၉၈ မှာလည်း ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့ အသေအချာ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက နအဖက ဒီလို တောင်းဆိုယုံနဲ့ လွှတ်တော်ခေါ်ပေးမှာမဟုတ် ဘူးလို့ ကျနော်တို့က တွက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်အောင် လုပ်ပြီး နအဖ ကိုစိန် ခေါ်တဲ့၊ ဖိအားပေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ တချို့ဆို ခုထက်ထိ မလွတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက NLD ကအဖျားရှုး သွားပြီး နောက်ဆုံး CRPP လောက်နဲ့ပဲ တင်းတိမ်နေခဲ့တယ်။ အခုCRPP ရော၊ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာချက်ကို ရော ဆုတ်ဖြဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ဝင်ဦးမယ်ဆိုယင်တော့ ကျနေုာ်တို့ ပေးဆပ်ရကျိုးမနပ်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင် ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်း ထောင်ကျနေတဲ့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ခုထက်ထိ ထောင်ထဲမှာရှိနေပါ သေးတယ်။ သူတို့အတွက် ကျနော် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။´´ ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တရားဝင် ထုတ်ဝေသည့် The Voice ဂျာနယ်တွင် အပတ်စဉ် ဆောင်းပါများ ရေးသား ပြီး လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသည့် ၉၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်း ကိုနေသန်မောင်ကလည်း “ ၀င်မယ် မ၀င်ဘူးကို အခုမှ ဆုံးဖြတ်ပြီး နှစ်ပေါက်အောင် ထိုင်စောင့်နေခဲ့တာဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ် ရဲ့ သရုပ်မှန်မဟုတ်ဘူး။ အစတုန်းကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံကို စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ ဖတ်စရာမလိုဘူး၊ ရွှေဂုံတိုင်က လွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ဒီချုပ်ဟာ ရှေ့နောက်စကားညီအောင် မ၀င်ဘဲနေမယ်လို့ မဲဆနရှင်တွေက နားလည်ထားလိမ့်မယ်။ အခုကျမှ ၀င်မယ်လို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သူတွေကို လက်တစ်လုံးခြား တစ်လျှောက်လုံး လိမ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ဆိုလို တာက နိုင်ငံရေးသိက္ခာပေါ့ဗျာ။ အခုမှ ပြည်သူ့မျက်နှာထောက်ပြီး လုပ်ရမယ်၊ ၀င်ရမယ်ဆိုတာကိုက ဒီပါတီ ဟာ အတော်ကလေးကို နိုင်ငံရေးမှာ လက်တွေ့ကျကျ မစဉ်းစားတတ်ဘူး၊ ပြောချင်တာတွေ လျှောက်ပြော ပြီး အနားကပ်မှ လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်လို့ပဲ ယူဆစရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီအချိန်မှာ ဒီပါတီကို ဝေဖန်နေ လည်း တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး မဝေဖန်ချင်တော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာက အနှစ်(၂၀)ဖြတ်သန်းမှုအရ တော်လှန်ရေးလုပ်ချင်တဲ့ပါတီတွေ အပြင်ထွက်ထိုင်နေတာ ပို ကောင်းမယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်´´ ဟုပြောဆိုလိုက်သည်။ ကိုနေသန်မောင် မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ နှင့်ရုပ်ရှင်ပညာကို အထူးပြုလေ့လာနေသူဖြစ်သည်။
“NLD ဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကို တလျှောက်လုံး မလုပ်လာဘဲနဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ကြေ ငြာစာတမ်းကို တရားသေဆုတ်ကိုင်လိုက်ကတည်းက အတော်ကလေးကို စဉ်းစားဥာဏ်နည်းပါးတဲ့ ပါတီ ဆိုတာ ပြောစရာတောင် မလိုဘူး။´´ ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြား ခဲ့သည်။
နအဖ စစ်အစိုးရက ၎င်းတို့ စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတင်းအကျပ် အ တည်ပြုပြီးနောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲများကို ပြန်လည်ကျင်းပပေးမည်ဟု ကြေငြာခဲ့ သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်၊ နိုင်းငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို လွှတ်ရမည် စသည့်တောင်းဆိုချက်များဖြင့် ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ကို NLD ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ရွေးကောက်ပွဲမှ မ၀င်ယင် ပါတီအဖျက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ချက် NLD မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေရောက်လာတာ သူတို့ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးလား၊ အခုမှ တခြားရွေးစရာမရှိတော့ပါဘူးလို့ အကြောင်းပြ ယင် ကျနော်တော့ လက်မခံဘူးဗျ´´ ဟု ကိုကျော်လင်းဦးက ဆက်ပြောသည်။ ကိုကျော်လင်းဦးက ထိုင်း နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးကို အထူးပြုလေ့လာ နေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
၉၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကျောင်းသားအများစုမှာ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပြီး အများစုမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားများကလည်း ထောင်ထဲတွင် ကျန် နေခဲ့သည့် ကိုမျိုးမင်းဇော်၊ ကိုအေးအောင်၊ ကိုလှိုင်ဝင်းဆွေ၊ စသည့်ကျောင်းသားများ၊ ထောင်ကျခံယင်း အ သက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကိုသက်ဝင်းအောင် လိုကျောင်းသားများ၏ မျက်နှာကို NLD အနေဖြင့် ကြည့်သင့် ကြောင်းပြောဆိုသွားသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/22/2010 1 အကြံပြုခြင်း
Ron Hoffmann, Canada ambassador to Myanmar-AP
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ရွန်ဟော့ဖ်မန်း။
ရန်ငြိမ်းအောင် (လူငယ်) | တနင်္ဂနွေနေ့၊ မတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၀ မိနစ်
ကျနော်တို့ မမွေးခင် ၁၉၅၈-ခုနှစ် ဖ-ဆ-ပ-လကြီး ကွဲတုန်းက၊ အဖွဲ့ချုပ်ကြီး သန့်ရှင်းဖို့ လိုသည်ဟု ခံယူသော-နုတင်နှင့်၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့ချုပ်ကြီး တည်မြဲရေးသည် အရေးကြီးဆုံးဟု ခံယူသော ဆွေငြိမ်းအုပ်စုများ အာဏာပြိုင်ကြတာ ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာ မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
ဖ-ဆ-ပ-လကြီး ကွဲခဲ့၍ ဦးနေဝင်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက အာဏာအရသာ တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ နောက်တော့ ရာစုနှစ်တဝက်ကျော် နိုင်ငံဒုက္ခရောက်ရသည်။ အခု NLD ကွဲလျှင်တော့ ဘယ်တော့ မှ စစ်ကျွန်ဘဝက လွတ်မည်ကို မသိနိုင်တော့ပါ။ အဖွဲ့ချုပ်၏သမိုင်း သန့်ရှင်းစွာ ကျန်ရစ်ပါစေ ...။
ကိုထွဋ် | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၈ မိနစ်
အခုလ ၂၉ ရက်နေ့ဆိုရင် ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင်ဌာနချုပ်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဗဟို ကော်မတီဝင်များ တွေ့ဆုံပြီး သမိုင်းဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေမှာ ပါနေပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်တွေကြားမှာ “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားအမြင်တွေ ကွဲလို့။ “မှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်” တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းခဲ့မယ်လို့ ပါတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် ပါတီကနေ ထွက်တော့မယ်လို့ ဦးဝင်တင်က ပြောတယ်ဆိုတာလည်း သတင်းဌာနတွေမှာ ကြားနေရတယ်။
အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်မယ့်ဘက်က မှန်တယ်၊ မှတ်ပုံမတင်မယ့်ဘက်က မှန်တယ်ဆိုပြီး တဖက်ကို လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်၊ အမြင်တွေ ရှိတာဖြစ်လို့ ပါတီဟာ နှစ်ခြမ်းကွဲရတော့မယ့် အခြေအနေကို ဦးတည်နေတယ်။
တကယ့်အဖြစ်မှန်ကလည်း မှတ်ပုံတင်တာ မှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုရုံနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းချက် လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ့်အဖြစ်မှန်က ကတ္တီပါပိတ်သားစ တခုလို နူးညံ့သိမ်မွေ့လွန်းလှတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ စစ်အစိုးရက NLD ကို ထောင်ခြောက်ဆင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေတွေကိုကြည့်ရင် နအဖဘက်က လူပါးဝလွန်းတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရပြီဖြစ်တယ်။ (ဥပမာတခုကို တင်ပြရရင်တောင်၊) မှတ်ပုံတင်မယ့် ပါတီကျတော့ ကျပ် ၃ သိန်းပဲ ကော်မရှင်မှာ တင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်လောင်းကျတော့ ကျပ် ၅ သိန်း တင်ရမယ်။ နအဖဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေက အစိုးရစရိတ်နဲ့ မလှိမ့်တပတ် တင်ကြမှာ အသေအချာပဲ။ စစ်အစိုးရ အထောက်အပံ့မရှိတဲ့ ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ငွေကုန်ကြေးကျ အလွန်များလိမ့်မယ်။
ဒီကနေ့ NLD ရဲ့ အခြေအနေဟာ မိုင်းထောင်ထားတဲ့ စစ်မြေပြင်တခုကို ဖြတ်သန်းနေရတာ ဖြစ်တယ်။ ခြေချော်နင်းမိတာနဲ့ မိုင်းထိပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတော့မှာဖြစ်တယ်။
အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းကြားက ဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုရင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာက မကြာသေးခင်က ဦးဝင်းတင် ပြောခဲ့သလိုပဲ “သွေးစည်းညီညွတ်ရေးလက်နက်” ကို သုံးရမှာဖြစ်တယ်။ အနှစ် ၂ဝ ကျော် ပါတီဝင်တွေကြားမှာ ကျောချင်းကပ်၊ နှလုံးသားချင်း နီးစပ်ခဲ့ကြတဲ့ အစဉ်အလာကို ဒီနေ့ ဆက်လက်စောင့်ထိန်းပြီး မှတ်ကျောက်တင်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။
- ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအကြမ်းကို ရွေးဆွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ခဲ့သူ ကိုယ်စားလှယ်အများစုဟာ လက်ညှိးထောင်ခေါင်းညိတ် နအဖလူတွေပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း မကျဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ စစ်အစိုးရက တိုင်းသိကမ္ဘာသိ မဲခိုးမဲလိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း (လုံးဝ) မကျဘူး။
ဒီအချက်တွေကြောင့် NLD ပါတီ မှတ်ပုံမတင်သင့်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သင့်ဘူး။
ဟုတ်ပြီ၊ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်မှာလား..၊ လူထုကြားမှာ ဘယ်လောက် ပြင်ဆင်ထားသလဲ၊ ဖျက်နိုင်တဲ့အင်အား ရှိလား။ ပါတီ မြေအောက်သွားမှာလား၊ မြေအောက်ကနေ ဆက်တိုက်မှာလား၊ တောင်အာဖရိက ANC လို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနဲ့ မြေအောက်တော်လှန်ရေး တပြိုင်နက်တည်း လုပ်မှာလား။ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ တောခိုမလား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို အဖွဲ့ဝင်တွေ သေချာဖြေကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ ယောင်ဝါးဝါးလုပ်လို့တော့ မရဘူး။
ဒါဖြင့် ဦးအောင်ရွှေတို့ ပြောသလို ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီဆိုပါစို့။ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင် လိုအပ်ချက်အရ (၃ နေရာ) သာ မဟုတ်ဘဲ တနိုင်ငံလုံးမှာ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မှာလား။ နိုင်မယ်လို့ ထင်လား။ လွှတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်တော့ NLD က ၇၅ % ရှိရာမှာ ၅ဝ % အထက်တော့ ရနိုင်သေးတယ်လို့ မျှော်လင့်ကြည့်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကလည်း ဒါကို တွက်ထားပြီးသား၊ သူ့ကိုယ်သူ မယုံကြည်ဘူး။ မယုံကြည်တော့ အစီအမံတွေ လုပ်ထားမယ်ဆိုတာလည်း အသေအချာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံးကတော့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ၂ဝဝ၈ က ဆန္ဒခံယူပွဲလိုပဲ ညစ်ပတ်လိမ်ညာပြီး သူတို့ပါတီတွေပဲ မဲရအောင် စစ်တပ်က လုပ်မှာပဲ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲက မျက်လှည့်ပွဲနဲ့ မခြားဘူး။
ဒါ့အပြင် ပါတီမှတ်ပုံတင်လိုက်ပေမယ့်လည်း အကျဉ်းကျနေသူတွေ ပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်မရဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်မျိုးတွေ ပါနေတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေတွေအရ တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ နအဖက ညစ်ပြီး အချိန်မရွေး ပါတီကို ဖျက်လိုက်နိုင်သေးတဲ့ အန္တရာယ်လည်း ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ထားဖို့ လိုတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ ဘယ်လမ်းကိုရွေးရွေး NLD အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာ မရှိဘူး။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေ မဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်ရတော့မယ့် အနေအထား ဖြစ်တယ်။
ကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံမတင်ရင် ပါတီက အလိုအလျောက် မြေအောက်ရောက်မယ်။
နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက်တော့ NLD ဟာ ထွေးပြီးသား တံတွေးကို ပြန်မျိုမချခဲ့ဘူး၊ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ကာကွယ်ခဲ့တယ်၊ ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စောင့်ထိန်းခဲ့တယ်၊ အသက်သေချင် သေသွားပစေ၊ မူပေါ်မှာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် ရပ်တည်သွားတယ်ဆိုတာတော့ ကျန်ခဲ့မယ်။ သမိုင်းလှမယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့တော့ နအဖ ဥပဒေအရ တရားမဝင်တော့တဲ့ ပါတီတရပ်အနေနဲ့ NLD နာမည်နဲ့ လှုပ်ရှားခွင့်တွေ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မယ်။
ဦးအောင်ရွှေတို့ သဘောအတိုင်း မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်နေရာ ၃ နေရာပဲ အဖြစ်သဘော ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ ဒေါ်စုနဲ့ အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေ ပြန်လွတ်လာရင် ရှိပြီးသား တာဝန်တွေအတိုင်း ပြန်တာဝန်ယူနိုင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ ဘယ်သူ တရားတယ်၊ ဘယ်သူ မတရားဘူး၊ ဘယ်သူ ညစ်ပတ်တယ်၊ ဘယ်သူ မညစ်ပတ်ဘူး ဆိုတာတော့ ကလေးက အစ၊ ခွေးက အစ၊ ကမ္ဘာကြီး အဆုံး သိနေတော့၊ အထူးပြောနေစရာတော့ မလိုပါဘူး။
အနှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ NLD ဟာ စစ်အစိုးရကို အပြီးအပြတ် မဖြိုလှဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အင်အားစု ဘယ်သူမှ စစ်အစိုးရကို အပြီးအပြတ် မဖြိုလှဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူပြတ်ကိုယ်ပြတ် တိုက်ပွဲမှာ သူမပြတ်ဘဲ ကိုယ်ပြတ်တာမျိုးကတော့ သမိုင်းလှမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။
ဦးအောင်ရွှေတို့၊ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ကလည်း ပါတီကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယ ရှိစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဦးဝင်းတင်တို့၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ ပါတီကို ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း လက်မောင်းသွေးဖောက် သောက်ပြစရာကို မလိုဘူး။
Yes ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ No ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသမိုင်းဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လုပ်လို့ မရဘူး။ လာမယ့် ၂၉ ရက်နေ့မှာလုပ်မယ့် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ Yes ဆိုတဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ချင်တဲ့ လူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ အနာဂတ်စီမံကိန်း၊ ရေရှည်ရေတို လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြပြီး အဆိုတင်သွင်းသင့်တယ်။
No ဆိုတဲ့ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုတဲ့ ဦးဝင်တင်တို့ကလည်း သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ ရေတိုရေရှည် စီမံကိန်းတွေကို အစည်းအဝေးမှာ အဆိုတင်သွင်းသင့်တယ်။ ညီညွတ်ရေးကို ရှေ့တန်းတင် ဆွေးနွေးသင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မဲပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ညှိနိူင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်၊ မဲပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုခြင်းအားဖြင့် မိထ္ထိလာ NLD က အဆိုပြုထားသလို ဗြောင်မဲ မပေးသင့်ဘူး။ လျှို့ဝှက်မဲပဲ ပေးသင့်တယ်။ ပြီးရင် ဒီမိုကရေစီပါတီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးတင်ဦး သဘောထားသလို အများသဘောအတိုင်း ပါတီနောက်ကို လိုက်သင့်တယ်။ ပါတီက နုတ်ထွက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။
ဒီကနေ့ အခြေအနေဟာ NLD အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတခုကို ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်တယ်။ အဆိုးဆုံးတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ၂၉ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ သဘောထား နှစ်မျိုးကွဲပြီး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နောက်လိုက် အဖွဲ့ဝင်တွေ နှစ်ခြမ်းကွဲရင်တော့ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။
မှတ်ပုံမတင်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။ တညီတညွတ်တည်း ရင်ဆိုင်သင့်တယ်။ တညီတညွတ်တည်း ဖြတ်သန်းသင့်တယ်။ ပါတီနဲ့အတူ တိုက်ပွဲကို ခရီးဆက်သင့်တယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားသတင်းစာမတ်လ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အတွဲ (၄) အမှတ် ( ၃ )
http://ifile.it/sikre2jThe Arakan National Newspaper Vol.4 No.3 March 2010 Colour
နအဖ စစ်အစိုးရမှ ချီးမြင့်သော တပ်မဟာ(၇) တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှု ဆုလက်ဆောင် “ချစ်သူမြိုင်စံအိမ်”
“ချစ်သူမြိုင်စံအိမ်” ဘုရားအနေကဇာတင် နှင့် အိမ်သစ်တက် မင်္ဂလာ အစီအစဉ်
“ချစ်သူမြိုင်စံအိမ်” ဘုရားအနေကဇာတင်နှင့် အိမ်သစ်တက် မင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
တပ်မဟာ(၇) တိုက်ပွဲတွင် ဒီကေဘီအေမှသတ်သွားသော ရွာသား ဖါးမော်ကလိုး၏ ကျန်ရစ်သူ ဇနီးမယားနှင့် ကလေးငယ်များ
တပ်မဟာ(၇)တိုက်ပွဲတွင် ဒီကေဘီအေမှသတ်သွားသော ရွာသား ဖါးအယ်ကလိန်း၏ ကျန်ရစ်သူ ဇနီးမယားနှင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်
"ချစ်သူမြိုင်စံအိမ်" နှင့်ပါတ်သက်သော ဓါတ်ပုံများကို ပေးပို့ လာသော ဒီကေဘီအေ ၉၉၉ တပ်နှင့် အထူးနီးစပ်သော လူကြီးမင်းအား အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကြားရတဲ့အသံတွေပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ၁၄ နှစ်ကျော်ကြာအောင် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို အခြေခံမူတည်ပြီး အခု ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေ၊ ပါတီဖွဲ့စည်းခွင့်ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။
ဒီဥပဒေတွေအပေါ်မှာ ဝေဖန်ချက်တွေ၊ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ကြိုတင်တွေးခေါ်မှုတွေ၊ ရှုတ်ချကန့်သတ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အကောင်းမြင်ဝါဒီများ ရှိသလို၊ အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်ဝေဖန်မှု၊ လေကန်မှုတွေရှိနေခဲ့တာမို့ ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း ဆိုတာတွေဟာ တကယ်တော့ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီကနေ့ ကန့်ကွက်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေရာမပေးလို့ပါဘဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီး ပြည်ပြေးဖြစ်နေကြတဲ့ ဦးစိန်ဝင်းတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ၊ လက်ရှိအစိုးရကို တစိုက်မတ်မတ်ဆန့်ကျင်နေပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အခြေချ နေထိုင်သူတွေ နေရာမရလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…… ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အခြေအနေမှန်တွေ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေချည်း နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် နေထိုင်ပါတယ်။ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးရှိပြီး အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုရာမှာ ချမ်းသာတဲ့သူရှိသလို ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေရှိနေတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါတာနဲ့ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေတို့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတို့ကို တရားမမျှတဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဥပဒေတစ်ခုကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ ရပိုင်ခွင့် စံနှုန်းနှင့် တိုင်းတာနေတာ လုံးဝ သဘာဝမကျပါဘူး။
ဥပဒေမှန်သမျှကို စနစ်တကျလေ့လာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်၊ သေချာပြီ ဆိုတော့မှ ကန့်ကွက်။ ဒါဆိုရင် သဘာဝကျပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မပါတာနဲ့ဘဲ ကန့်ကွက်မယ်၊ ရှုတ်ချမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ နည်းလမ်းမကျလှပါဘူး။
တည်ငြိမ်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့် မုန်တိုင်းထန်သွားမယ်ဆိုရင် မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ အခြားနိုင်ငံတော်တော်များများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေဟာလည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းပါပဲ။
အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းရွက်တာကို မကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက်တယ် ဆိုရင်လည်း အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူတွေ တပ်မတော်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့ လွဲမှားတဲ့သတင်းအမှား တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တာ မကြိုက်သူတွေရှိသလို လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေး ရေချိန်နဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ တပ်မတော်က နိုင်ငံအရေးအရာတွေမှာ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ပါဝင်နေလိမ့်အုံးမယ်ဆိုတာ လက်ခံသူတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ရှုမြင်ကြည့်ပါ။ လူသားဆိုတာ မျိုးဆက်တွေ တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် ပြောင်းလဲနေတာမို့ တပ်မတော်သားဆိုတာလည်း ပြည်သူတွေကြားက မျိုးဆက်အလိုက် ပေါက်ဖွားလာသူတွေပါ။ တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင် လူသက်တမ်းဟာ နှစ် ၁၀၀ ပဲ ရှိပါတယ်။
အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ပါနေလို့ ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါမပါဘဲ ကျန်နေလို့ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ မဖျက်ဆီးပစ်ပါနဲ့။ တရားဥပဒေနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့သူတွေ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ပြီး ဥပဒေနဲ့ မညီညွှတ်တဲ့သူတွေ ဘေးဖယ်နေကျခြင်းဟာ တရားမျှတပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ရည်မှန်းပြီး နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေကျတဲ့ တခြားသော ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်။
phado aungthein ပေးပို့ပါသည်။
FDB's Suggestion Letter to NLD_Mar 21,2010
http://ifile.it/kfdhq84FDB Suggestion Letter to NLD 21-3-10
http://ifile.it/hz8wafcJoint Open Letter
ဘယ်လမ်းလိုက်ကြမလဲနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး (၁၂)
နအဖက ဘာ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးတာလဲ။ အာဏာကို သူတို့ဘဲ ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်သွားမဲ့အတူတူ ဘာ့ကြောင့် အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါသလဲ။
အရပ်သားတွေကို ဇယားအရှုပ်ခံပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ပါဝင်လာစေတဲ့ (၉၁)ဌာန ကိုလိုအုပ်ချုပ်ရေးလို ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ကျင်းပပေးရခြင်းက အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး သူတို့မရခဲ့တဲ့၊ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် နောက်အနှစ် (၂၀၀)ကြာလည်း မရနိုင်တဲ့ တရားဝင်မှု(Legitimacy)ကို လိုချင်တဲ့အတွက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ အာဏာနှင့် ငွေတွေ အလျှံပယ်ရှိနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေအဖို့ ဒေသဆိုင်ရာ အိမ်ကျယ်ဘ၀က တစ်ဆင့်တက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ တွင်ကျယ်နိုင်ဖို့က လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ တရားဝင် အစိုးရဖြစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကို လူထုကသာ ပေးနိုင်တာမို့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် မျက်ကန်း တစ္ဆေမကြောက် တစ်ကိုယ်ရေ ကောင်းစားရေးအတွက် ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအဖို့ မလွှဲမရှောင်သာ လူထုရှေ့မှောက် (ဟန်ဆောင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်) အဆုံးအဖြတ်ခံဖို့ ဖြစ်လာရတာပါ။
ကောင်းပြီ။ ဒါဆို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေက လူထုအဆုံးအဖြတ်အတိုင်း နာခံကြတော့မှာလားဆိုရင် ထင်သာထင် မ၀င်ဘူး ကျောင်းအမလို့ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ဆီးရီးယား၊ အီဂျစ်၊ ကင်ညာ၊ ဇင်္ဘာဘွေ၊ အီရန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာစတဲ့ နိုင်ငံတွေလို အာဏာရှင်နှင့် အာဏာရှင်တစ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ လူထုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်မှန်ကို ရယူရေးထက် ရွေးကောက်ပွဲကို မိမိအာဏာ ဆက်လက်တည်တံ့ရေးအတွက် ထင်သလို ခုတုန်းလုပ်ခဲ့တာတွေသာ တွေ့ရပါတယ်။ ရက်စက်တဲ့ အာဏာရှင်တွေအောက်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ မူလ အခွင့်အရေးတွေဟာ ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ပန်းနှင့် အလိုအလျောက် မရောက်လာတတ်ပါဘူး။
နအဖလို အာဏာရှင်မျိုးတွေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ (၁) အမည်ခံ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ (၂) မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနှင့် အနိုင်ရရှိဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိနှိပ်၊ မဲလိမ်၊ မဲခိုး၊ မဲညစ်တာတွေကို လုပ်တတ်ကြပြီး ပြည်ပက ပြစ်တင်ရှုံ့ချ ကန့်ကွက်မှုတွေဟာ ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်က လအနည်းငယ်လောက်သာ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက မကြေမနပ်သူတွေကိုတော့ တရားဝင် အရွေးကောက်ခံ အစိုးရအဖြစ် ဇွတ်ကြေညာပြီး ပိုလို့တောင် ဖိနှိပ်နိုင်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမတော့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက အင်အားစုတွေဟာ ဖိနှိပ်မှုတွေ လျော့ပါးလာရေး၊ ဥပဒေတွင်းတိုက်ပွဲ ရင်ဆိုင်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်းတွေ ဖြေရှင်းရေး၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး၊ ဒေသတည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် မတရားတက်လာတဲ့ အစိုးရကိုဘဲ ဦးတည် အဖြေရှာဖို့ ဖြစ်လာရပြန်ပါတယ်။ မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်ပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ခေတ်သစ်အာဏာရှင်တွေ ကောင်းကောင်း သိထားကြပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLDနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခွင့်အရေးရတိုင်း အစဉ်ခွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ကြာနေပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိရင် NLDသည် ဘာမှ အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို သိထားတာမို့ အခုလို ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေမျိုးကို တမင်ထုတ်ပြန်ပြီး ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစီအစဉ်ရှိရှိ ထိုးခွဲလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ထိုးနှက်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာမှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ မရှိသော ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွေကို သိက္ခာကင်းမဲ့စွာ ပြဌာန်းခဲ့ခြင်းအတွက် NLDက ဦးဆောင် ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်ကွက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကို ပြဖို့ လိုပါတယ်။ သို့သော် ဒီဥပဒေတွေကို ကန့်ကွက်ရင်းနှင့် တစ်ဖက်ကလည်း အဓိကကျတဲ့ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ချက်က တဖြည်းဖြည်းနှင့် နောက်တန်းရောက်သွားတာကိုလည်း သတိမူဖို့ လိုပါတယ်။ ကုလနှင့် နိုင်ငံတကာကလည်း နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံထက် လွတ်လပ်မျှတပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရေးကိုဘဲ ဇောင်းပေး ပြောလာပါပြီ။ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတတ်တဲ့ လက်တွေ့နိုင်ငံရေး(Real Politics) ဖြစ်စဉ်တွေပါ။
၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲပြီး ဂန္ဒီခမ်းမကြေညာချက်၊ နောက်တစ်ဆင့်လျော့ပြီး အရွေးချယ်ခံ အမတ်များကို ၁/၉၀အရ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခွင့်ပြုရေး တောင်းဆိုချက်၊ နောက်တစ်ခါ လွှတ်တော်သာခေါ်ပေးပါ၊ De jure အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်နှင့် နောက်ဆုံး ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်အထိ အခြေခံတောင်းဆိုချက်တွေ ရွေ့လျောလာမှုတွေက အရှိတရားတွေပါ။ လက်တွေ့ကျကျ ဆက်စပ် နှိုင်းယှဉ် သင်္ခန်းစာထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေဖက်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပါ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအားဖြင့်သာ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချနိုင်တယ်ကနေပြီး လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်သည် အဖြေမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ ဖြေရှင်းရေးသည်သာ မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကို အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲတောင်းဆိုရပါတယ်။ တစ်ချိန်က သစ္စာဖေါက်တွေအဖြစ် သတ်မှတ် ရှုံ့ချခံခဲ့ရတဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကိုလည်း အခု သွေးသောက် မဟာမိတ် ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာမလာဘောဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပြသနာ မဟုတ်သလို၊ NLD၊ စစ်တပ်၊ KNU KIA NMSPစတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်း ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူထုအကျိုးစီးပွါးကို စေတနာမှန်၊ အနစ်နာခံပြီး၊ လက်တွေ့ကျကျ ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ ထမ်းဆောင်နိုင်သလဲက နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ချမှတ်ပါတယ်။
NLDက ဘယ်လမ်းလိုက်မလဲဆိုတာက မေးခွန်းမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းကြောင်းမှန်ကို NLD သွား မသွားကသာ မေးခွန်းမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းမှန်ဆိုတာကို ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးမှအပ အခြားမရှိက မနေ့က လမ်းကြောင်းမှန်ပါ။ ယနေ့ လမ်းကြောင်းမှန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ၊ လမ်းကြောင်းတွေက အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲတတ်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားများရဲ့ နိုင်ငံရေး အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော မိမိအမျိုးသားများ လွတ်မြောက်ရေး ပန်းတိုင်ကတော့ ဘယ်သောအခါမှ မပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒီသဘောတရားသည် ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ၊ မငြိမ်းအဖွဲ့တွေ၊ အတိုက်အခံအဖွဲ့အားလုံး အပါအ၀င် NLDကိုလည်း သက်ရောက်ပါတယ်။
NLDရဲ့ ယနေ့စိမ်ခေါ်မှုက ပြည်သူလူထုကို အကောင်းဆုံး အလုပ်အကြွေးပြုနိုင်မဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းမှန်ကို ရွေးချယ်နိုင်မှုလို့ဘဲ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းလေး သတ်မှတ်ပေးကြဖို့ အထူးသဖြင့် ပြည်ပက ခေါင်းဆောင်တွေကို မေတ္တာရပ်လိုပါတယ်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကို မိမိရဲ့ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အပေါ် အခြေခံပြီး ငြင်းခုန်ရွေးချယ်နေကြတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ အချောင်သမား တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ ရေနှင့် မီးနှင့် အစမ်းသတ်ခံပြီး မှတ်ကျောက်အတင်ခံတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပါ။ ပါတီမှတ်ပုံတင် မတင်ကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်များကို မိမိအမြင်နှင့် မတူတာကြောင့် လူထုကို သစ္စာဖေါက်တယ်။ လူထုကို စော်ကားတယ်။ စစ်တပ်ကို ဒူးထောက်အညံ့ခံတယ်။ တိုင်းပြည် မျက်နှာ မကြည့်ဖူး။ အချောင်သမားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ တာဝန်မဲ့ မစွပ်စွဲခင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ၊ သတ္တိ၊ သမာဓိ၊ သစ္စာတွေကို အရင်မြင်အောင် ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သူတို့သည် သူတို့ကို ဝေဖန်သူ ခေါင်းဆောင်များနည်းတူ တိုင်းပြည်ကို ချစ်သူ။ သစ္စာရှိသူ၊ သတ္တိရှိသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမြင်မတူတာတွေကို တာဝန်ှရှိရှိ တာဝန်ခံပြီး ဝေဖန်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
အတိုက်အခံတွေဘက်က အခြေအနေ အခွင့်အခါတွေကို ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရင် နအဖက ထုတ်ပြီးသား ဥပဒေတွေကို ပြင်ပေးတာထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အဖမ်းခံနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ထွက်ပေါက်ရှာသွားနိုင်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက် (Realistic Expectation) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပါတီမှတ်ပုံမတင်လို့ အာဏာရှင်မပြုတ်ကျသွားသလို၊ NLDက ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်လို့ နအဖက ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဘဲနေမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲကို ကမ္ဘာက လက်ခံလာစေရေးအတွက် နအဖက NLDကို ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း NLDက စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ရွေးကောက်ဝင်လာရင် သူတို့အနိုင်ရဖို့ အခက်အခဲ ရှိပြန်တာကြောင့် ဝင်ရင်တောင်မှ အကွဲအပြဲနှင့် ချိနဲ့နဲ့ ဝင်လာရအောင် မတရား ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို တမင်ထုတ်ပြန်ပြီး သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီးနေတယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ NLDက မိမိသဘောနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် နအဖ သိပ်ကြိုက်သွားမှာပါ။ ကျုပ်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အဆိုပြုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို တွက်ချက်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အထူး သံသယထားပြီး နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရှိဖို့က ပါတီရှိဖို့ထက် အရေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံရေးရှိရင် ပါတီမရှိလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ပါတီရှိပြီး နိုင်ငံရေး မရှိလျှင် ဝိညာဉ်မရှိ၊ အလကားဘဲလို့ ဆရာဦးဝင်းတင် ပြောတာ အင်မတန် မှန်ကန်ပါတယ်။ ယနေ့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၀)ပါတီ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ (၁၀)ပါတီလုံးကို ရည်တွက်ပြနိုင်သူ အင်မတန် နည်းပါးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ သို့သော် ဦးအေးသာအောင်လို၊ ဦးပူကျင်ရှင်းထန်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ရှိနေသရွေ့ ပါတီမရှိလည်း နိုင်ငံရေး ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ရှိခြင်း မရှိခြင်းသည် ပါတီဝင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များအပေါ်တွင်သာ တည်ပါတယ်။ ပါတီ ရှိခြင်း မရှိခြင်းပေါ်မှာ မတည်ပါဘူး။ မည်သို့သော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော ဥပဒေအောက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမှာ ဆရာဦးဝင်းတင်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ ဦးဆောင်မှု ရှိနေသရွေ့ နိုင်ငံရေး မသေပါဘူး။ အမျှော်အမြင်ကြီး၊ စေတနာမှန်၊ သတ္တိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိနေသရွေ့ NLDသည် မှတ်ပုံတင်သည် ဖြစ်စေ၊ မတင်သည် ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေး ရှိနေမှာကို ကျုပ်တို့ ယုံမှားသံသယ မရှိကြပါဘူး။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဖက်ဆစ်ဂျပန်အောက်မှာ အခြေအနေအရ ထားရှိခဲ့ရသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို ခေါင်းဆောင်များ ရှိနေခဲ့တာမို့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို ဘယ်သောအခါမှ မျက်ခြေမပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို သမိုင်းမှာ သက်သေထူပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးမှာ CECနှင့် CC အဆုံးအဖြတ်အတိုင်း လိုက်နာမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်း ပါတီထိပ်ပိုင်းမှာ ဖုံးမနိုင် ဖိမရ လူသိရှင်ကြား သဘောထားကွဲနေကြပါပြီ။ မှတ်ပုံတင်ရင် ပါတီက အနားယူမယ်လို့ ပြောသူရှိသလို မှတ်ပုံမတင်လိုသူများ လူထုနိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်နိုင်ကြပြီး မှတ်ပုံတင်လိုသူများဖြင့် ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာသည်အထိ၊ ဆက်သယ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောသူက ပြောလာပါပြီ။ ခံစားချက်တွေ သိပ်ပြင်းထန်လွန်းနေကြဟန် တူပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက “ပြည်သူတွေ စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာ ဒုက္ခရောက်လွန်းနေတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ပြီး လွတ်လပ်ရေးယူမိတာ အပစ်တစ်ခု ကျူးလွန်မိသလိုဘဲ”လို့ ငြီးငြူခဲ့တာကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တဲ့ NLDသည် လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား။ ပါတီခေါင်းဆောင်များ သဘောထား ကွဲလွဲမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ပါတီနှစ်ခြမ်း ကွဲသွားမလား။ ပါတီကွဲရင်တော့ လူထုနစ်နာ၊ တိုင်းပြည်နစ်နာမယ် စသဖြင့် ပူပန်သံတွေက ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ပိုမိုကျယ်လောင် နေပါပြီ။
ပူပန်သူတွေရဲ့ စိတ်သောက စေတနာကို အလေးအနက်ထားပါသော်လည်း ကျုပ်အမြင်မှာတော့ သိပ်ပူပန်စရာ မလိုလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပါတီမှာ နှစ်ခြမ်းကွဲစရာ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ရှင်းပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိလျှင် NLDပါတီသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါလို့ ဦးလွင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်တို့ရဲ့ မိမိကိုယ်ကို အင်မတန် နှိမ့်ချပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ ပြောစကားများကိုလည်း ကြားယောင်နေမိပါတယ်။ ဦးအောင်ရွှေရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သစ္စာတရားကလည်း သက်သေထူခဲ့ ပြီးပါပြီ။ တစ်ကယ်တော့ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ ကာလတုန်းက အခုလိုဘဲ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကြေနပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များ အများအပြား ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသဘောထား ကွဲလွဲမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ပါတီက မှတ်ပုံတင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မတင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သည်ဖြစ်စေ၊ မ၀င်ဘူးဖြစ်စေ၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ အကျိုးဆက် မှားမှား မှန်မှန်၊ ဆိုးဆိုး ကောင်းကောင်းကို တစ်နိုင်ငံလုံးက ပါတီဝင်တွေက လူထုနှင့်အတူ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို အလွယ် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ အကြေအလည် ဆွေးနွေးပြီးသည့်နောက်မှ အများသဘောတူညီမှု(unanimity) အရသာ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးလှတဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုးကို မဲများသူတွေက မဲနဲသူတွေ အပေါ်မှာ မဲအရ အနိုင်ယူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပါတီရဲ့ ရှေ့ခရီးကြမ်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုကို တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပါတီ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ပွင့်နေတာကို ကျုပ်တို့ မမေ့ထားသင့်ပါဘူး။ အများသဘောတူ တညီတညွတ်တည်း တခဲနက် မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် အကောင်းဆုံးက ပြည်သူလူထုချစ်ခင် ကိုးစား ယုံကြည်မှု ရရှိထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို နာခံမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးက တိုင်းပြည်အတွက်ကော ပါတီအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ လေးလေးနက်နက် အကြံပြုလိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး သေရန် မလို။ ပါတီမှ အနားယူရန် မလို။ ပါတီကွဲရန် မလို။ လူထု အားပျက်ရန် မလို။ လဠ မျက်ရည်ကျရန် မလို။
လူထုဦးစိန်ဝင်းက NLDကို အသုံးမကျတဲ့ ပါတီတစ်ခုအဖြစ် ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ချိုးနှိမ်ဝေဖန်တာကို မတ်လ(၁၉)၊ ၂၀၁၀ထုတ် မိုးမခမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် လူထုကို ဒီမိုကရေစီ မဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တာဝန်အရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းကို ပြပါဆိုလျှင် NLDဖြစ်ပါတာမို့ NLDကို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်။ NLDသည် နိုင်ငံတနံတလျားမှာ ဘ၀တွေ အပျက်ခံပြီး လူထုအတွက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ လူထုပါတီဖြစ်ပါတယ်။ လူထုဦးစိန်ဝင်း စွပ်စွဲသလို အချောင်သမားပါတီ မဟုတ်ပါဘူး။ အချောင်သမားတွေလည်း ပါတီအတွင်းမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ စစ်အစိုးရရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေမှာ NLDတွေနှင့် ပြည့်လျှံနေတာကို ဆရာဘာ့ကြောင့် မမြင်နိုင်ရပါသလဲ။ စစ်အစိုးရ ဖိနှိပ်မှုကို တလျှောက်လုံး ခါးစည်းခံနေသည့် NLDကို ဆရာဘာ့ကြောင့် အခုလို ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောရက်နိုင်ပါသနည်း။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲက ဦးဆောင် ခံတိုက်နေရတဲ့ NLDလို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးဝင်ယူနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး မပေါ်ပေါက်သေးခင် ပါတီတစ်ခုလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နှင့် သိမ်းရမ်းရိုက်ချလိုက်ခြင်းသည် တာဝန်မမဲ့လွန်း ပေဘူးလား။
NLDရဲ့ အမှားတွေကို သိထားရင်တောင် စေတနာကောင်းထား ထောက်ပြပြီး ခုနေခါမျိုးမှာ မိတ်ဖက်သဘောအနေနှင့် လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဘ၀တွေ အစတေးခံပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး စစ်အာဏာရှင် အထုအထောင်းခံနေရတဲ့ NLDပါတီကို တစညတို့၊ ကြံ့ဖွတ်တို့နှင့် အတူတူဘဲလို့ အခြေအမြစ်မဲ့ စွပ်စွဲလိုက်ခြင်း၊ လူထုထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် ဗြောင်ကျကျ သပ်လျှို ထိုးနှက်လိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အားမရတာနဲ့ ပါတီတစ်ခုလုံးကို အချောင်သမားပါတီသဘော သိမ်းကြုံးစွပ်စွဲလိုက်ခြင်း၊ အခုလို မိုးထဲ ရေထဲမှာ ပါတီစည်းလုံးမှုပြိုကွဲပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားအောင် ဌာနချုပ်ကို အမြောက်နဲ့ ပစ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းတို့အတွက် စစ်အာဏာရှင် နအဖက အတော် ကျေနပ်အားရသွားမှာပါ ဆရာ။ ဆရာဦးစိန်ဝင်းတစ်ယောက် ယုံမှားကင်းစွာ ဘယ်လိုများ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်နိုင်ပါစ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက မဆွေးနွေးတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နအဖကြားမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေး အထစ်အငေါ့ပြသနာရှိလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဦးသုဝေက မဇ္ဈိမသတင်းဌာနကို ဖေဖေါ်ဝါရီ(၂၆)မှာ ပြောလာပြန်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မပြောကြတော့ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တင်းမာလို့ (သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့)နအဖက မဆွေးနွေးတာဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထပ်လာအုန်းမလား မသိပါဘူး။
ကျုပ်မမှားဘူးဆိုလျှင် ဦးသုဝေ၊ ဦးရွှေအုန်းနှင့် အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်တို့သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ န၀တ၊ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တစ်ကြိမ်မက တောင်းဆိုခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိထားပါတယ်။ နအဖက ထုံးစံအတိုင်း လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ နေနေသာ အကြောင်းတောင် မပြန်ဘူးလို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ ဦးသုဝေ သုံးသပ်တဲ့အတိုင်း သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် ဦးသုဝေ၊ ဦးရွှေအုန်း၊ အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်တို့နှင့် န၀တ၊ နအဖကြားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေး အထစ်အငေါ့ ပြသနာရှိလို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ညင်းခဲ့တာလား။ သို့မဟုတ် ဦးသုဝေတို့တွေက သဘောထားတင်းမာလို့ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲခဲစင်တဲ့ ရွှေမင်းသား စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ညင်းပယ်နေတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုပါတယ်။ ဦးသုဝေလို ရှေ့မှီ နောက်မှီ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို အချိန်ကိုက် မေ့လျော့သွားတာကို အံ့သြမိပါတယ်။ တိုက်ပွဲမစခင်ပင် ကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင်များ ရန်သူပျောက်နေပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲတောင် မရောက်သေးဘူး မီးလျှံကို ရွှေတောင်မှတ်၊ သားမက်ကို သူခိုးထင်နဲ့ အခုလို ရုတ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေကြပုံမျိုးနှင့်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲရောက်ရင်တော့ မတွေးဝံ့စရာတွေ ဖြစ်လာနေမလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
အသတ်ခံ၊ အထုခံပြီး လူထုအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘယ်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင်သူတွေကိုမှ မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ လူထုကို ဖွတ်ကြောပြာစု၊ ခရုဆံကျွတ်၊ ထမင်းရက်ချန်၊ ရေရက်မှန်ဖြစ်အောင် နှိပ်စက်ပြီး ကြိကြိတက်ချမ်းသာသွားသူကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ NLDနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက် မဟာမိတ်အဖြစ် မြင်သင့်ကြပါတယ်။ ရန်ဖက်အဖြစ် မမြင်သင့်ကြပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဝင်၊ မ၀င်ဝင်၊ နိုင်နိုင်၊ မနိုင်နိုင် စစ်အာဏာရှင် မပြုတ်ကျသွားပါဘူး။ ဦးသုဝေအပါအ၀င် ပါတီအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်လုပ်သူများသည် စစ်အာဏာရှင် ထာဝရ ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လူထုတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်သည့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကို လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းမှာ အစီအစဉ်ရှိရှိ သတိထား လမ်းဖွင့်ထားပေးဖို့ သမိုင်းပေးတာဝန် ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က စနစ်တကျ ဆုတ်ခွါပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးတာလို့ ဦးသုဝေကဘဲ ဆိုပြန်ပါတယ်။ စစ်တပ်ကို စိတ်နှင့်တောင် မပစ်မှားနဲ့ဆိုပြီး ပဒုမ္မာကွင်းမှာ ကျည်ကာအင်္ကျီဝတ် အသံဗြဲကြီးနဲ့အော်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးကို ပြေးသတိရလိုက်မိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေက အင်္ဂုလိမာလလို အကျွတ်တရားရပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က စနစ်တကျ ဆုတ်ခွါဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးတယ်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးသုဝေရဲ့ အမြင်အရဆိုရင် အထုခံ လူထုကဘဲ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို သံဃာစင်ပေါ်တင်ပြီး ထိုင်ရှိခိုးပေးရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး လူထုကို စိတ်ရှိတိုင်း နှိပ်စက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို အကျွတ်တရားရသွားတဲ့ သူတော်စင်တွေအဖြစ် အခြေအမြစ်မဲ့ အတင်းကာရော ပုံဖေါ်မှုမျိုးက ရုတ်ပျက် ဆင်းပျက်နိုင်လှပါတယ်။ တစ်ကယ် အကျွတ်တရားရသွားတဲ့ပုံ၊ လူထုပေါ် စေတနာထားလာပုံမျိုးကို ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်လောက်မှာတောင် ရှားရှားပါးပါး တွေ့မိပါသလားလို့ မေးလိုပါတယ်။ လက်ငင်းတွေ့နေရတာကတော့ ၂၅ရာခိုင်နှုံး အမည်တပ်ပြီး ရှိသမျှအာဏာကို သိမ်းကြုံးယူထားရုံနှင့်တင် လောဘမသတ်နိုင်သေးဘဲ လူထုခွဲတမ်း ၇၅ရာခိုင်နှုံးထဲ အတင်းဝင်နှိုက်ဖို့ အရှိန်အ၀ါသုံး အရှက်မရှိ မျက်နှာပြောင်တိုက် မဲဆွယ်နေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဗိုလ်နှင့် စစ်ဗိုလ်လူထွက်တွေသာ၊ အလုံးအရင်းနဲ့ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ပြီး လူထုကို ဆက်နှိပ်စက်၊ အောင်သေ အောင်သားစားဖို့ စစ်ဗိုလ်တွေ သူရဲ မင်းရဲ ကြိုးစားနေတာကို ဆရာဦးသုဝေ မမြင်မိပေဘူးလား။ စစ်ဗိုလ်တွေကို ပစ်ဖါးတဲ့ ဒီလိုပြောလုံးမျိုးကို လူထုက သိပ်သတိထားတတ်တာမို့ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူများ ဆင်ခြင်သင့်ကြပါတယ်။
မတ်လ (၂၁)၊ ၂၀၁၀
NLD ၏ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့မည့် အရိပ်အယောင်အပေါ် ၉၈ မျိုးဆ...
လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ အခွင့်အလမ်း စစ်...
ရခိုင်အမျိုးသားသတင်းစာမတ်လ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အတွဲ (၄) အမ...
နအဖ စစ်အစိုးရမှ ချီးမြင့်သော တပ်မဟာ(၇) တိုက်ခိုက်သ...
စစ်အစိုးရ၏ 'ဝ' တပ်ဖွဲ့အပေါ်စုံစမ်းမှု အစီရင်ခံစာအပါ် ...